Best Desktop Lugood Saaxiibkii u Mac / Windows
> Resource > Lugood > Best Lugood Saaxiibkii in ay kor u dhig maxay Lugood ma aan samayn karo
Wixii iPhone, iPod, iyo dadka isticmaala iPad, Lugood waa qalab ugu horeysay in ay isticmaalaan si ay u maareeyaan music, videos, Podcasts, buugaag, iyo iibsadaan ka Apple App Store, iwm Waxaa qabtaan shaqo wanaagsan maaraynta files kuwan. Si kastaba ha ahaatee, qaadashada arrimaha copyright tixgelin, Apple ma Lugood files kala iibsiga ka iDevices (iPhone / iPod / iPad) si Lugood ha. Haddii aad lumiso Lugood Library on your computer, aad wajahayso khatar ah oo weligiis badiyay heesaha oo dhan, playlists, iyo videos. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay Saaxiib Lugood ah si uu u xaliyo dhibaatada.
Wondershare TunesGo Retro waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Lugood asaxaabta waan isku deyey. Waxay ka dhigaysa waxa Lugood maqan music -transferring, videos, sawiro, iwm ka iPhone / iPad / iPod in computer ama Lugood. Marka aan sidaa yeelno, waxaad soo kaban karto, Lugood Library si toos ah uga iPhone ama buuxiso Lugood Library la files in mar ka jira oo keliya qalab aad.
Isku day Saaxiibkiis Lugood maxkamad free version hadda!
Hadda labada Saaxiibkiis Lugood for Windows iyo Lugood wehel u Mac diyaar u yihiin inay kala soo bixi. Waxaad dooran kartaa nooca saxda ah ee aad u baahan tahay. Saaxiib Lugood si fiican u shaqaynayaan la iPhone, iPad iyo iPod xiriiri socda ee macruufka cusub 7, macruufka 6 & macruufka 5. Waxa kale oo ay taageertaa iPod classic, nano iPod, iyo iPod shaandheyn iyo sidoo.
Nuqul music ka iPhone / iPad / iPod in Lugood Library. Haddii aad rabto in aad dib u dhiska maktabadda Lugood on heeso cusub computer ama kala iibsiga si toos ah lagala soo bixi on iPhone in Lugood Library, ka dibna aad ku xidhan karto qalab aad kombiyuutarka, abuurtaan Saaxiibkiis Lugood, nuqul heesaha oo dhan si ay u Lugood leh click fudud ama nuqul heeso loo doortay in ay Lugood . Oo haddii heesaha qaarkood hore u jirin in Lugood, ka dibna uu furmo suuqa Music, astaanta Lugood in la muujiyaa doonaa inuu kaa caawiyo inaad ka fogaato samaynta nuqul.
Dib music iyo videos in computer. Saaxiib Lugood kuu ogolaanaya in aad dib ilaa music iyo videos si toos ah u computer. Marka aan sidaa yeelno, marnaba ma walwal ku saabsan badiyay kasta oo heeso ama videos. Oo waa inaad sidoo kale ku wareejin karaa iPhone cajallado in desktop u tafatir dheeraad ah la Kan sameeyey Windows Movie ama iMovie.
Photos Dhoofinta ka qalab si computer. Saaxiib Lugood gelineya inaad dhoofin sawiro ka iPhone / iPad / iPod taabto si computer ka ah maamul ama tafatir dheeraad ah.
Bedelka music iyo videos ka computer si iPhone kala duwan, iPod, iyo iPads aan tirtiro faylasha asalka ah. Waxaa laga yaabaa in aad wareero oo la habkaani, sababtoo ah Lugood qalabka wareejin karaan music iyo videos. Nuqdada muhiimka ah ee habkaani waa in ay kuu ogolaanaysaa inaad ka computer qalabka kala duwan wadaagaan music, xitaa iPhone saaxiibadaa 'aan tirtiro wax files asalka ah. Lugood kaliya wareejiyo music iyo videos qalabka Lugood-ku xidhay. Haddii kale, waxaa overwrite doonaa files warbaahinta in qalabka.
Photos Import ka computer si iPhone / iPad / iPod taabto. Haddii aad qabtid qaar ka mid ah sawirada qiimo on your computer, waxaad isku dayi kartaa Saaxiibkiis Lugood in ay dajiyaan sawirada kuwaas oo si iPhone.
Ka sokow sifooyinka kor ku xusan, Saaxiibka Lugood wax badan qaban kara. Waxaa xitaa playlists ka iPhone / iPod / iPad bedeli karaa Lugood Library iyo computer, iyo qeybsanaan ku xigeenka.
Isku day Saaxiibkii Lugood si aad u hesho muuqaalada sii wanaagsan iskaa!